दाजु भाउजुको हत्यमा भाई संलग्न::Online News Portal from State No. 4
दाजु भाउजुको हत्यमा भाई संलग्न
बागलुङ, ३१ साउन – आफ्नै दाईभाउजुको हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बोबाङका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ८ का ६४ बर्षिय भाने बिक र ६० बर्षिय बिमा बिकको हत्या आरोपमा भानेका भाई ५४ बर्षिय मसाने पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले शुक्रवार उनलाई सार्वजनिक समेत गरेको छ । मसानेले घरायसी झगडामा खुकुरी प्रहार गरेर भाउजुको बिमाको हत्या गरेपछि बञ्चरो प्रहार गरेर दाईको हत्या गरेको खुलेको छ ।
घर परिवारमा भएको अनैतिक सम्बन्ध बारे केही समय देखि दाई भाईको झगडा भैरहेको थियो । साउन २५गते बेलुका दाई बारीमा काम गर्न गएको बेला पारेर मसानेले भाउजु सँग झगडा गरेका थिए । झगडाकै रिसमा दाउरामा राखेको खुकुरी झिकेर भाउजुको हत्या गरेका थिए । उक्त घटनामा भाउजु चिच्याएकी थिइन् । बिभत्स ढंगले हत्या गरेपछि खुकुरी मृतककै हातमा राखेर मसाने भागेका थिए । भाग्ने क्रममा दाई बारीबाट आएको देखेर घर बाहिर राखेको बञ्चरोले पुन प्रहार गरेर दोश्रो हत्या भएको देखिएको हो । ‘दाई ढलेपछि पनि उनले पटक पटक बञ्चरो प्रहार गरेको देखिन्छ’ प्रहरी उपरिक्षक नवराज भट्टले भने, ‘दाउरा चिरेझै पटक पटक चोट हान्दा मृतको टाउको समेत छियाछिया भएको थियो ।’ यस्तो बिभत्स घटनापछि घरमै सुतेका मसानेले बिहान छिमेकीलाई हत्या भएको भन्दै गाउँले डाकेका थिए ।
घटना बारे जानकारी पाएपछि ईलाका प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी घटनास्थ पुगेको थियो । उक्त टोलीले शव बरामद गरेर ल्याएको हो । अनुसन्धानका लागि भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरिक्षकको नेतृत्वमा टोली गएको थियो । टोलीले अनुसन्धानको क्रममा मसानेलाई पक्राउ गरेको हो । मसानेको घरमा अघिल्लो दिन पकाएको मासुभात नखाएको देखेपछि शंका गरी पक्राउ गरेको थियो । शुरुमा घटना बारे अस्विकार गरेका मसानेले पछि प्रहरी नियन्त्रणमा सबै कुरा खुलाएका हुन् । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका मसानेलाई बिहिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याइएको छ । प्रहरीले मसानेलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउने तयारी गरेर शुक्रवार म्याद थप गरेको छ । मृतक र हत्या गर्नेका परिवारका सदस्य भने ढोरपाटनमा बस्दै आएका थिए ।
यसैबीच शुक्रवार प्रहरीले लागू औषध दुव्र्यसनी र ओसारपसार गर्ने युवकलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ । ती युवकले सदरमुकाममा बसेर लागूपदार्थ सेवन गर्ने र ओसारपसारको काम समेत गर्दै आएको खुलेको छ । ताराखोला गाउँपालिका वडानं. २ घर भएका सुदिन छन्त्यालले बेच्न लागेको बेला प्रहरीले पक्राउ गरको हो । बेचिरहेको थाहा पाएपछि प्रहरी उपरिक्षक भट्टले अन्य दुव्र्यसनीको फोनबाट ट्रयाकिङ गरेर भेटेको बताए ।
यसैबीच बालिकालाई पटक पटक बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले ५४ बर्षका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । बागलुङ नगरपालिका वड ानं. ७ का पतिराम सार्की पक्राउ परेको प्रहरीले बतायो । सार्कीले सुतेकै स्थानमा गएर बालिका बलात्कार गरेका थिए । पक्राउ परेका सार्की र छन्त्याललाई कानूनी कारवाहीको लागि मुद्दा लगाउने तयारी गरेको भट्टले जानकारी दिए ।